Guddoomiye Jawaari oo hadallo dar daaran ah u jeediyay Guddiga Madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka – Radio Muqdisho
Guddoomiye Jawaari oo hadallo dar daaran ah u jeediyay Guddiga Madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa ka qeyb galay kulan Guddiga Madaxa banaan ee dib-u-eegista Dastuurka loogu wareejinayay nuqulo ka mid ah dastuurka qabyada ah, si ay dib u eegis ugu sameeyaan.
Kulanka oo lagu qabtay xarunta Villa Hargeysa ee Muqdisho ayaa waxaa ka qeyb galay Wasiirka Dastuurka, Guddiga joogtada ee ah baarlamaanka u qaabilsan dastuurka, waxaana Guddiga madaxa banaan lagu wareejiyay nuqulo ka mid ah dastuurka, gaar ahaan cutubyada 1aad iyo kan afaraad oo ka hadlaya maqaamka ay yeelaneyso caasimadda, jinsiyadaha, xaduudaha iyo xuquuqda uu leeyahay muwaadinka.
Caasho Geelle Guddoomiyaha Madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka oo kulanka ka hadashay ayaa sheegtay in dib u eegista dastuurka ay ku saleydoonaan danta dalka iyo dadka.
“Soomaalida inta aan ka gaari karno, haddii ay ahaayn lahayd codkeena waxaan urruurineynaa talooyinka dadka, si ay fikir ugu darsadaan dib u eegista dastuurka qabyada ah, anigu waxaan texgelin doonaan afkaaraha dadka ee ku aadan wax ka badalka cutubyo ka tirsan qabyo qoraalka dastuurka” ayay tiri Marwo Caasho Geelle.
Wasiirka Dasuurka ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Xuseen Sheekh Maxamed ayaa tilmaamay in dastuurka uu dalka yeelanayo mid ku saleysan sinaan iyo cadaalad, isla markaana laga saari doono waxkasta oo ka hor imaanaya jiritaanka danta Ummadda Soomaaliyeed iyo jiritaankooda.
“Farxad ayay noo tahay in aan ka qeyb galo shirkan, waxaan shacabka u sheegayaa in dastuurkan uusan ahayn dastuur dad gaar ah ama meel gaar ah lagu maamulayo, shacabka ayaa iska leh tallooyinkiina ayaa lagu biirinayaa” ayuu yiri Wasiirka Dastuurka.
Guddoomiyaha baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa dar daaran u jeediyay guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka, isla markaana ay xilhdibannada gacan ku siin doonan gudahasha howlaha loo xilsaaray.
“Dhamaan Xildhibaannada ku jira baarlamaanka anigoo ku hadlaya magacooda waxaan idin balan qaadayaa xilka la idin dhiibay waa xil Qarameed, marka maloo kala hari doono sidii aan gacan idinku siin lahayn howsha la idin xilsaaray, howsha waa ammaano, marka Allaha idin fududeeyo, anaguna waxkasta oo aad nooga baahataan diyaar ayaan idin nahay” ayuu yiri Guddoomiye Jawaari.
Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya oo booqasho ku tegtay Gobolka Mudug